TELEFERIKA : Tafakatra 10 tapitrisa dolara isan-taona ny fatiantoka noho ny fitohanana
Samy nilaza ireo olon-tsotra, mpanao politika, tompon’andraikitra… nanontaniana fa tetikasa hamaha ny olan’ny fitaterana sy fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra ny tetikasa teleferika (TPC). 20 janvier 2022
Mahatratra 10 tapitrisa dolara isan-taona ny fantiantoka ateraky ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto amin’ity renivohitr’i Madagasikara ity. Sarotra anefa ny manitatra fotodrafitrasa noho ny hakitrok’ireo trano miorina tsy ara-dalàna.
Raha tsiahivina mantsy ny tantara niorenan’Antananarivo, tanàna natsangana sy naorina ho an’olona miisa telo hetsy (300.000) ity renivohitr’i Madagasikara ity. Amin’izao fotoana izao anefa, efa nitombo mihoatra ny avo 10 heny amin’izany ny isan’ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Izany hoe lasa maherin’ny enina hetsy sy telo tapitrisa (3.600.000). Ny 60 isan-jato amin’ireo no mifamezivezy eto an-drenivohitra sy ny distrika manodidina isan’ andro.
Noho izay fitombon’ny mponina izay hatrany anefa, niitatra sy nivelatra ihany koa ny tanàn-dehibe, mitombo isa ny fiarakodia ary ireo no mitarika fitohanan’ny fiarakodia sy ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha akapoka izay, zava-dehibe ary tsy azo ihodivirana ny fametrahana tetikasa fanitarana ny lalana sy ny tanàna toa izao, mba handrindrana sy hanamorana ny fivezivezen’ny mponina eto an-drenivohitra.
Tanàna maloto sy tery indrindra
Raha ny tatitra tamin’ny taona 2018, fotoana nitondran-dramatoa ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, Antananarivo no anisan’ny tanàna naloto sy nahitana fitohanan’ny fifamoivoizana maro indrindra maneran-tany. Na ahoana izany lazaina, tsy azo eritreretina intsony ny mbola hijanonana amin’izany. Iaraha-mahalala koa anefa fa sarotra ny manangana fotodrafitrasa vaovao tahaka ny lalàna eto. Antony : hiteraka fikomiana eo amin’ny mponina ny fikitihana ny trano fonenany ; fandravana izany na famindrana toerana azy ireo. Tsy azo atao izany eto Antananarivo ary mety hiafara amin’ny hetsi-bahoaka indray, eny fa na dia maro tsy tambo isaina aza ireo manorina trano tsy manana taratasy ara-dalàna ary mametraka ny tranony eny amin’ny toerana tsy tokony hisy izany.
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vina sy ny asa fampandrosoana entina hanavaozana ny tanana mba hifanaraka amin’ny toetr’andro na « modernisation » toy ny tetikasa : ny « Trains Urbains » izay an-dalam-panamboarana ankehitriny ny TPC. Samy finiavana vaovaon’izao Fitondrana izao ireo ary heverina fa hampihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana na “embouteillages”, izay tombanana fa miteraka fandaniana mitontaly eo amin’ny 10 tapitrisa dôlara isan-taona, raha ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny, araka ny fanadihadiana nataon’ny Jica. Voaporofo taorian’ny fanadihadiana nataon’ny manam-pahaizana koa fa raha mihena antsasany fotsiny ny fitohanana eto, dia hahazoana mampihena ny fandaniana eo amin’ny 5 tapitrisa dolara isan-taona.
Mandalo amin’ny toerana anisan’ny be olona indrindra eto an-drenivohitra : Anosy (biraom-panjakana, mpianatra Ankatso-Antanimena-Ambatobe, faritra indostrialy sy fandraharahana ara-barotra Ankorondrano…) ny teleferika . Zotra maitso hampitohy an’Anosy sy Ankatso : izay hampifandray ny Ivon-toeran’ny asam-panjakana sy ny Oniversite an’Antananarivo, ary mandalo ny tanàna ambony manan-tantara. Mirefy 3,3 km, misy fiantsonana miisa 4 ary maharitra 10 minitra ny faharetany. Eo koa ny zotra volomboasary hampitohy an’Anosy sy Ambatobe, ary mandalo ny afovoan-tanàna (Ambohijatovo, Analakely, Soarano) sy ny lalana misy ireo orinasa lehibe (Antanimena, Ankorondrano, Ivandry). Mirefy 9,4 km, misy fiantsonana 9 ary 28 minitra ny faharetany. Amin’ny alalan’io tetikasa io dia mahazo ny tandrify azy avokoa ny rehetra mahakasika ny tolotra fitanterana eto an-drenivohitra : taksibe, taksy, fitaterana mihantona, lamasinina an-drenivohitra. Tafiditra ao anatin’ny ady amin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa ny fametrahana tetikasa. Mihatsara ny tontolo iainan’ny mponin’Antananarivo rehefa mipetraka ity tetikasa ity, hihasalama ny olona, hihena ny marary, hihena noho izany ny fandaniana isan-tokantrano natokana hitsaboana. 40.000 ny olona kasaina hotaterina isan’andro Tombanana ho 40.000 eo ho eo ny olona hotanerina isan’andro. Hisy efitra kely na “cabines” miisa 294, izay hahazaka olona 10 ka hatramin’ny 12. Tombanana ho 3000 hatramin’ny 4.000 ariary ny saram-pitaterana. Raha toa ka lany adiny iray na adiny roa mihitsy aza raha mandeha taksibe avy any Anosy mankany Ambatobe, raha mandeha teleferika anefa dia vita ao anatin’ny 30 minitra izany elanelana. Tsy mandoto tontolo iainana ary miainga amin’ny herinaratra manokana na herinaratra azo avy amin’ny masoandro sy "groupe electrogène" manokana no hampandeha azy.
Hampihena ny fandaniana maherin’ny 5 tapitrisa dolara sy hahazoana fidiram-bola eo amin’ny 11 tapitrisa isan-taona eo ny fisian’ity teleferika ity, ankoatra ireo tombontsoa maro hafa izay entiny. Misy ny fiverenan’ny vola ampiasainaavy hatrany amin’ny alalan’ireo tapakila takina amin’ny mpandeha. Tsara ny manamarika fa 15.000ariary ny saran-dalana amin’ny fiarakaretsaka miala eo Analamahitsy ho eo Antanimena ary 25.000 ariary ny avy eny Ankorondrano makeny amin’ny Rova. Fa tena misy ny olona mampiasa ireo fiara karetsaka ireo, tsy tapaka isan’andro. Ity anefa 4000 ariary fotsiny, izany hoe tena ilaina ity tetikasa ity.
Nanaja fepetra sy dingana rehetra
Ny dingana rehetra tokony hajaina rehefa manao tetikasa goavana tahaka izao dia efa nohajaina mialohan’izao hanombohana ity tetikasa ity. Ao anatin’izany ny fanaovana ny EIES - Étude d’impact Environnementale et Sociale. Na ny fijerena izay mety ho fiantraikany ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy. Vita soa amantsara sy efa noraisina ireo fepetra hifanaraka amin’izany. Efa voadinika ihany koa izay mety ho fiantraikany ara-kolotsaina. Tafiditra tanteraka ao anatin’izany ihany koa ny fifampidinihina sy fakan-kevitry tamin’ny vahoaka, sy ireo vondrona rehetra liana sy voakasika amin’ity tetikasa ity na “consultation publique”. Efa tontosa ihany koa izany.